3da Warbixin ee CMO kasta oo B2B ah wuxuu ubaahanyahay inuu ku noolaado kuna noolaado 2020 | Martech Zone
Maaddaama dhaqaaluhu ku sii dhowaanayo hoos u dhac dhaqaale iyo miisaaniyadaha shirkadaha ayaa hoos loo dhigay, xaqiiqda dhabta ah ee suuqleyda B2B sannadkan ayaa ah in doolar kasta oo la kharash gareeyo la weydiinayo, la baarayo, isla markaana uu u baahan doono in si toos ah loogu xidho dakhliga. Hogaamiyaasha suuq geynta waxay ubaahan yihiin inay noqdaan kuwa laser diirada saaraya u wareejinta miisaaniyadooda xeeladaha iyo barnaamijyada la jaan qaadaya xaqiiqada cusub ee iibsadaha iyo la shaqeynta iibka si loo gaaro himilooyinka dakhliga sanadka.
Laakiin sidee ayey CMO ku ogaan doontaa haddii ay maalgelin ku sameynayaan barnaamijyada saxda ah iyo taatikada haddii aysan haysan ilo lagu kalsoon yahay oo xog iyo falanqeyn ah oo ay heli karaan? Sidee bay uga dhaadhicin doonaan daneeyayaashooda ganacsiga muhiimka ah iyo kooxda fulinta in suuq geynta aysan aheyn qarash bixin ku saleysan laakiin ay tahay maalgashiga dakhliga mustaqbalka iyo mashiinka koritaanka ganacsiga?
Iyada oo miisaaniyad la dhimay iyo caqabado kale oo la xiriira COVID-19, helitaanka xogta la isku halleyn karo iyo falanqaynta ayaa ka muhiimsan sidii hore maxaa yeelay waxay awood u siinayaan CMOs iyo hoggaamiyeyaasha suuqgeynta inay caddeeyaan ROI, si toos ah ugu xiraan howlaha suuqgeynta dakhliga, iyo tijaabiyaan tabo iyo habab kala duwan si mustaqbalka loo go'aamiyo maalgashi. Suuqleyda, dabiiciyan, waxaa loo malaynayaa inay yihiin sheeko-yaqaan-haddaba maxaan u filan karin inaan sheeko ku sheegno xogteena gaarka ah? Tani waa inay ahaataa miisaska miiska - sannadka 2020 iyo wixii ka dambeeya.
Xaqiiqdu waxay tahay, in kastoo, in kastoo hoggaamiyeyaasha suuqgeynta ay heli karaan kumanaan xog oo xog ah iyo boqolaal warbixinno ah, haddana waxaa laga yaabaa inaysan diiradda saarin kuwa ugu saameynta badan ganacsiga-gaar ahaan marka suuqa uu si deg deg ah isu beddelayo. Waxaan ku soo koobay waxa aan u arko saddexda warbixin ee ugu halista badan ee CMO-yada ay u baahan yihiin inay ku haystaan ​​fartaada hadda:
MQL-yadaadu ma soo saarayaan dakhli? Ma cadeyn kartaa? Waxay umuuqataa fikrad fudud oo toosan inlakala socon karo isha suuq geynta ee hogaaminta lana hubiyo in xogta 'lagu amaano' fursada ugu dambeysa iyo dakhliga laxiriira.
Si kastaba ha noqotee, dhab ahaantii, iibinta B2B waa muddo dheer oo si aad ah u adag, oo ku lug leh dad badan oo ku jira koontada iyo meelo badan oo taabasho ah iyo kanaallo inta lagu jiro safarka iibsadaha. Intaa waxaa sii dheer, iibinta badanaa waa lagu dhiirrigeliyaa inay soo saaraan hoggaankooda u gaarka ah ee ugu dambeeya la tartamaya ama xitaa ka sarreysa hoggaamiyeyaasha suuq-geynta ee CRM. Si loo xaqiijiyo xurmada xogtaan iyo warbixinta (yada) u dhiganta, waxaa muhiim ah in CMO uu si fiican ula jaan qaado madaxa iibka iyadoo la tixraacayo habka loo soo saaro raadadka iyo fursadaha.
Talo Pro: Qofkii markii hore soo saaray hogaaminta (suuq geynta ama iibinta) waa inuu raaco jidka oo dhan si loo abuuro fursada si loo ilaaliyo socodka xogta. Faa'iidada dheeraadka ah ee tan ayaa ah inaad awood u yeelan doonto inaad si joogto ah oo sax ah u cabirto celcelis ahaan waqtiga la xidho.
Warbixinta Xawaaraha Xawaaraha
Sideed u muujineysaa — adigoo adeegsanaya xog — in suuqgeynta lala jaan qaadayo iibka? Hoggaamiyeyaasha suuqgeynta waxay ka hadlaan iskaashiga dhow ee ay la leeyihiin iibka si joogto ah (u akhri: si joogto ah) laakiin waxay u baahan yihiin inay caddeeyaan in hoggaamiyeyaashooda suuqgeynta u qalma (MQLs) ay leeyihiin qiime aad u sarreeya oo aqbalaadda iibka ah, taas oo macnaheedu yahay u beddelashada hoggaanka u qalma iibka (SQLs) . Ururada suuq geynta ee dejiyay hanaan rasmi ah oo iibka ah si ay u aqbalaan una diidaan hogaaminta IYO aruurinta xogta tayada leh sababaha diidmada ayaa ah kuwa loo dejiyay guusha ka warbixinta iyo cabirka aaggan muhiimka ah.
Ururadaas ku qarash gareeysan suuq geynta xisaabta (ABM), tani waxay bedeshaa ciyaarta gebi ahaanba, sababtoo ah kuwa wax iibiya waxay isku darayaan galka xisaabaadka la magacaabay cinwaannada iibiyaha ee xisaabaadka la magacaabay. Sidaa awgeed, hadafku wuxuu noqonayaa in la cabiro waxtarka isku dhafka (suuq geynta iyo iibinta) wax ku oolnimada (soo saarista dakhliga) iyo waxtar kasta oo shaqsi ah sida kor lagu sharaxay. Inta badan ururada B2B (weli) ma sameynayaan ABM warbixin ku saabsan saamiga MQL iyo SQL maxaa yeelay waxay leeyihiin qaabdhismeedyo warbixineed oo keli ah, sidaa darteedna, ma ahan wax dhiirrigelin ah inay si wadajir ah u soo sheegaan.
Talo Pro: Beddel dhiirrigelinta iyo abaalmarinta labada koox, ku abaal mari labada xubnood ee kooxeed iyadoo lagu saleynayo cabirrada la wadaago sida heerka isdhaafsiga u dhexeeya galka iibka iyo xisaabaadka koontada suuqgeynta, tirada MQL-yada u beddelaya SQLs, iyo tirada SQL-yada u beddelaya fursadaha .
Warbixinta Waxtarka Mawduuca
In kasta oo kooxo badan oo suuq-geyn ahi maanta ay aasaaseen istiraatiijiyad adag oo xoog leh oo ku saleysan shakhsiyaadka iibsadaha, haddana wali waxay ku dhibtoonayaan inay abuuraan warbixinno waxtar leh oo toos ah oo tilmaamaya waxyaabaha heerka sare iyo hooseeya. In kasta oo nuxurka laftiisu ugu fiicnaan karo fasalka, haddana waa wax aan qiimo lahayn haddii kooxaha suuqgeynta ay muujiyaan sababta ay muhiim u tahay iyo saameynta ay ku leedahay ganacsiga.
Caadi ahaan, warbixinnada suuqgeyntu waxay qaataan a qof diiradda saar, (yacni safarrada macaamiisha ama u socodka nolosha), si loola socdo saamaynta dakhliga, laakiin sidoo kale waxaad tixgelin kartaa ka warbixinta diiradda diiradda iyo cabirida hanti kasta illaa dakhliga. Nidaamka si wanaagsan loo dhisay, dhibcaha taabashadu waxay kuxiran yihiin diiwaanka qofka. Marka la eego wakiilkeena lacagtu waa dadka, cabirkeenna maaddaduna waa dadka (iyo isticmaalkooda ah waxa ku jira), goob kasta oo taabasho ah waxaa loo aaneyn karaa dakhli. Waa xog isku mid ah oo taageerta safarka macaamiisha, oo kaliya laga fiiriyay aragtida mawduuca.
Talo Pro: Haddii dakhliga loo aaneeyo waxyaabaha shakhsiyadeed ee shakhsiyadeed ay aad u badan tahay, ku billow ku xirnaanta waxyaabaha MQL-yada. Waxaad ku kala saari kartaa waxyaabahaaga tirada MQL-yada hanti kasta oo la abuuray. Kadibna waad miisaami kartaa qaybta MQL ee ku aaddan qaab dhismeedka mawduuca.
Tags: ganacsiga ganacsigamadaxa suuq geyntacmowaxtarka nuxurkaCOVID-19Safarka macaamiishadakhliga ku hogaamiyawaxqabadka suuqgeyntahogaamiyaasha suuq geyntawaxqabadka suuqgeyntamqlXawaaraha dhuuntawarbixinta xawaaraha dhuumahawarbixinta
Eric Hollebone, Sarkaalka Adeegga Sare, ayaa keena DalboLabNidaamka Canshuuraha Dakhliga ee nolosha macaamiishooda B2B iyadoo la mideynayo istiraatiijiyad, teknolojiyad, iyo xog ku saabsan suuqgeynta, iibka, iyo adeegyada joogtada ah. Asalka tiknoolajiyadda iyo injineernimada wuxuu u saamaxayaa Eric inuu u dhawaado suuq-geynta aragti gaar ah oo cilmiyaysan, farsamo, iyo xog ku saleysan. Maanta, wuxuu diiradda saarayaa suurtagalnimada xogta weyn, AI, teknoolojiyada beecon, iyo IoT si loo beddelo muuqaalka suuqgeynta loona dardar-geliyo isbeddelka dijitaalka ee guud ahaan ururka.